Ihe onu ogugu | Netwọk Mgbasa Ozi
Ruo ugbu a anyị emeela igwe ojii nke akụkụ ya gbatịrị na kehoraizin ndọtị ma n'oge a anyị na-elebara ya anya igwe na-emepe emepe anyị ga-amalite na otu n'ime ụdị abụọ a nwere ike ịkekọrịta dị ka nke a, anyị na-ekwu okwu banyere Cumulus.
Cumulus bụ igwe ojii dịpụrụ adịpụ, n'ozuzu ya na usoro a kọwara nke ọma, nke na-etolite n'ụzọ ọ bụla bump, domes ma ọ bụ ụlọ elu, na onye ọkpọ elu ya na-adịkarị ka kọlịflawa. Akụkụ anyanwụ nke igwe ojii ndị a na-acha ọcha; isi ya gbara ọchịchịrị ma kwụ ọtọ. Mgbe ụfọdụ ha na-adị ka ifufe na-adọka ha.
A na-akpụ ha tumadi site na ụmụ irighiri mmiri ma ọ bụ kristal ice n'akụkụ ndị ahụ nke igwe ojii ahụ, n'ihi ogo ha, dị na okpomọkụ dị n'okpuru 0º C. Ha nwere ike ịnwe mmiri nke mmiri oyi. Ha na-etolite mgbe ha mere ebupụta mmiri kpatara ikuku na-enweghị ike nke ikuku n'elu ụwa. Mgbe ọ na-arịgo, ikuku a na-abanye n’igwe ojii ma na-eto dabere na ogo ikuku na-adị n’oge ahụ.
Oge ihu igwe dị mma na-eto n’oge ọkọchị site n’ehihie ruo mgbe anyanwụ dara, mgbe ha gbasara. Ọ bụrụ na enwere oke nkwenye ọ bụla ha nwere ike ịga n'ihu Cumulus congestus na ya ikpe ka ọ ghọọ Cumulonimbus, na mmiri ozuzo na oké ifufe. Ha ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na na Stratocumulus, ma ọ bụ na Cumulonimbus.
Ha na-adi iche di iche na acha anụnụ anụnụ nke igwe n'ihi oke njupụta ha nke na-eme ka ha di ocha ma na-egbuke egbuke. Maka otu ihe kpatara ntọala ahụ ga-apụta dị ka ọchịchịrị ma ọ bụ oji. Ikwesiri iji Polarizing nyo maka oke ọdịiche dị n'etiti igwe ojii na mbara igwe yana idozi elebara anya na bumps.
Ha dị iche umu anọ (Cumulus humilis, Cumulus mediocris, Cumulus congestus na Cumulus fractus) na ọtụtụ (Cumulus radiatus).
Isi mmalite - AKEMKỌ
Ozi ndị ọzọ - Stratus, Nke Stratocumulus
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Ihe Nchịkọta
Ihe omuma kachasi ojoo nke Australia